Qorshaha Farmaajo wuxuu ka halis badan yahay shirkadihii FOREX | KEYDMEDIA ENGLISH
Qorshaha Farmaajo wuxuu ka halis badan yahay shirkadihii FOREX
Inta badan dadka siyaasadda u dhuun duleela ayaa durba, si weyn uga digay qorshahaan halista ku ah xoolaha shacabka, u jeedka kooxda ayaase ah, in farsamadaan ku qaataan lagacta dadka aan siyaasadda ogaalkeeda lahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya – Inkastoo waayihiisa siyaasadeed gabagabo u muuqdaan, guuldarro qaraanna uu la kulmay doorashadii 15 May 2022, Madaxweyne hore, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu u muuqdaa inuu wali u taagan yahay marin habaabinta bulshada iyo u sii tafa-xeydashada dhaca xoolaha shacabka.
Kooxda Farmaajo u qaabilsan faafinta dacaayadaha, oo ay ugu horreeyaan Cali Yare iyo Cabdirashiid Duqa, ayaa hindisay qorshe lagu dhacayo xoolaha umadda, kaasoo ay ku sheegeen in Famaajo guri abaal marin ah looga dhisayo Muqdisho, lacagta lagu dhisanaya ay bixinayaan shacabka, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Akoonno ayaa laga furay bankiyada, waxaana la billaabay abaabul baraha bulshada ah, waxaa lacag la siiyay shaqsiyaad caan ah, si ay LIVE uga soo galaan baraha bulshada dadkana ku boorriyaan bixinta lacagta, taasoo sida xoguhu sheegayaan hadda u socota si xowli leh.
U jeedka laga leeyahay lacag aruurintaan ayaa ah, in shacab shantii sano ee la soo dhaafay la marin habaabinayay la sii lumiyo, loona sheego in Farmaajo uusan heysan xoolo uu guri ku dhisto haddana uu deggan yahay guri kiro ah.
Hayeeshee, su’aalaha loo baahan in ay is weydiiyaan dadka Soomaaliyeed, ayaa ah, guriga uu Farmaajo degay, kiradiisi waa imisa?, meeqa sano ayuu kirada hor mariyay? Aaway xiisaab-xirkii afar ka mid ah shantii sano ee xilka yahay.
Sida ay KON, hore u baahisay, Farmaajo wuxuu u guuray VILLA KAAH, halkaasoo ay muddo deggeneyd hay’ad caalami ah, wuxuuna 75,000 oo doolar ku bixiyay in hay’addaas la raro, dhamaadkii Feberaayo 2022, isagoo bishii 35,000 oo doolar ku kireystay guriga.
Farmaajo labo sano ayuu kirada hor mariyay, taasoo ku dhow hal malyan oo dollar, is-weydiintu, waa hal malyan guri ma dhisto miyaa? Farmaajo, waxaa ku maqan lacag dhan 1.7 bilyan ah oo uusan xisaab-xirkeedii la imaan afartii sano ee la soo dhaafay, sidaas awgeed waa maxay waxa lagu abaal gudayo?
Inta badan dadka siyaasadda u dhuun duleela ayaa durba, si weyn uga digay qorshahaan halista ku ah xoolaha shacabka, u jeedka kooxda ayaase ah, in farsamadaan ku qaataan lagacta dadka aan siyaasadda ogaalkeedu ku badneyn oo lab-la-kaca iyo qabyaaladda Farmaajo ku taagersan.
Dowladda Federaalka, ayaan wali ka hadlin qorshahaan, mana cadda jawaabta ay ka bixin doonto, lacagta shacabka ee lagu dhacayo qorshahaan ka halista badan shirkadhihii sheeganayay in ay ka shaqeynayaan suuqa FOREX, kuwaas oo si ba’an u boobay xoolahii shacabka 2020-kii.